गुर्जो सेवन गर्दै हुनुन्छ ? यी कुरामा ध्यान दिनुहोस् (आ;युर्वेद विभागबाट जारी पत्र सहि’त) - Onlines Time
November 10, 2020 November 10, 2020 onlinestimeLeaveaComment on गुर्जो सेवन गर्दै हुनुन्छ ? यी कुरामा ध्यान दिनुहोस् (आ;युर्वेद विभागबाट जारी पत्र सहि’त)
मानिसको शरीरमा रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउने गुर्जो नेपालका जहाँसुकै रोप्न सकिने अमूल्य जडिबुटी हो । नेपालमा धेरै ठाउँमा घर वरिपरि वा गमलामा रोपेर नियमित प्रयोग गर्न सकिने लहरे जडिबुटी गुर्जो, यसले अमृत समान काम गर्दछ भनिन्छ । यसको लहरा लामो समयसम्म सुक्दैन ।
कसरी हटाउने अनुहारको कालो पोतो ? नियमित नलगाउने यसपछि त्यसको फाइदा
बाथरूममा नुहाउँदा यी कुरा ख्याल गर्नुभएन भने जा’न सक्छ ज्यान
November 16, 2020 November 16, 2020 onlinestime
August 20, 2021 onlinestime